Apple Maps ရှိအိမ်လိပ်စာကိုပြောင်းလဲနည်း ငါက Mac ပါ
သင်၏အိမ်လိပ်စာကို Apple Maps တွင်မည်သို့ပြောင်းရမည်နည်း
အသုံးချ | | အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည်။ 13/10/2019 18:52 | Mac အတွက်အခြားအက်ပလီကေးရှင်းများ, လဲ tutorial
သင် app ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ Apple Maps သင်လိုချင်သောနေရာသို့သွားရန်လမ်းကြောင်းရရှိရန်သင်၏လက်ရှိတည်နေရာမှသင့်အိမ်သို့ပို့ဆောင်မည့်လမ်းကြောင်းကိုပိုမိုလွယ်ကူမြန်ဆန်စေရန်သင်၏အဓိကလိပ်စာကိုလည်းသတ်မှတ်နိုင်သည်။ သင်၏အိမ်လိပ်စာကိုပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည်ဖြစ်စေ၊ အရင်ကတစ်ခါမှမဝင်ဖူး၊ လုပ်လိုသည်ဖြစ်စေလုပ်ငန်းစဉ်သည်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ကြည့်ကြရအောင် Apple Maps တွင်အိမ်လိပ်စာကိုမည်သို့ပြောင်းလဲ / ထည့်နိုင်သည်.
Apple Maps သင်၏အဆက်အသွယ်ကဒ်တွင်သင်သိုလှောင်ထားသောလိပ်စာကို Contacts app တွင်အသုံးပြုပါ။ ထို့ကြောင့် Maps ရှိအိမ်လိပ်စာကိုပြောင်းလဲရန်အတွက် Contacts app မှကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ် Phone app မှတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်၎င်းကိုထည့်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲခြင်းပြုလုပ်ရမည်။ ထို့ကြောင့်၊ ဤအက်ပလီကေးရှင်းနှစ်ခုအနက်မှတစ်ခုကိုဖွင့်ပြီးသင်၏ထိပ်ဆုံးတွင်တွေ့ရမည့်သင့်ကိုယ်ပိုင်အမည်နှင့်နံပါတ်ကိုရွေးချယ်ပါ။ သင်၏အမည်နှင့်နံပါတ်ပေါ်တွင်နှိပ်ပါ၊ ညာဘက်အပေါ်ထောင့်ရှိ Edit ကိုနှိပ်ပါ။
သင်တို့သည်လည်းအလုပ်လိပ်စာထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ Add လိပ်စာကိုနှိပ်ပါ၊ အချက်အလက်ထည့်ပါ၊ တံဆိပ်ပေါ်တွင်ကလစ် နှိပ်၍ Work ကိုရွေးချယ်ပါ။
သင့်လိပ်စာကိုထည့်ပြီးတာနဲ့ OK ကိုနှိပ်ပါ။
ဤနည်းအားဖြင့်သင်အိမ်သို့လမ်းကြောင်းအလျင်အမြန်သို့မဟုတ်သင်ရောက်ရှိနေသည့်နေရာမှအလုပ်လုပ်ရန်ရနိုင်သည် Apple Maps.
စကားမစပ်, သင် Apple Talkings, လျှောက်ထား Podcast တခုကို၏ဇာတ်လမ်းတွဲနားမထောင်ကြပြီမဟုတ်လော
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ကွန်ပျူတာများ » Mac Pro » သင်၏အိမ်လိပ်စာကို Apple Maps တွင်မည်သို့ပြောင်းရမည်နည်း
Apple ကဝါရင့် San Francisco Apple Store ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်သည်